Jean Andrianaivo Ravelona – Hosodoko: « Hetsika lehibe indrindra iny faha-50 taona iny » | NewsMada
Jean Andrianaivo Ravelona – Hosodoko: « Hetsika lehibe indrindra iny faha-50 taona iny »
Tontosa, ny 9 desambra teo tao amin’ny Château d’Asnières 89, rue du Château, ny hetsika fankalazana sy fanamarihana ny faha-50 taona nanaovan’i Jean Andrianaivo Ravelona hosodoko. « Hetsika lehibe indrindra tamin’ireo rehetra notontosaiko iny jobily fanamarihana ny faha-50 taona voalohany ny hosodoko iny. Raha ny teto Asnières, hetsika lehibe na “grand evènement de l’année” izao jobily faha-50 taona izao. Porofon’izany ny fametrahana ny petadrindrina lehibe amin’ny panneau JCDecaux manerana ny tanàna eto Asnières. Teo amin’ny “diaspora” malagasy indray, hetsika goavana izany ka isaorana ny fandraisan’anjaran’izy ireo”, hoy i Jean Andrianaivo Ravelona.
Nizara telo lehibe ny zava-niseho nandritra ny fanamarihana. Fampiratiana sanganasan’i Jean Andrianaivo Ravelona nanomboka 1968 hatramin’izao taona 2018 izao. Mahatratra 60 ny naseho. Fandraisana anjaran’ny mpanao hosodoko 16 samy hafa : mpanakanto frantsay sy iraisam-pirenena, mpanao hosodoko malagasy, ary ny mpianatr’i Jean Andrianaivo Ravelona. « Concert du Jubilé », nampisehoana ny mozika voasoratra sy sanganasan’ny mpahay mozika klasika malagasy (Ramboatiana Etienne, Naly Rakotofiringa, Mara Carson) sy iraisam-pirenena, nolalaovin’ny Kolo Mozika, Volomboahangy Andriamanday. Tao ihany koa ny filalaovana ny sanganasan’i Mara Carson. Sanganasan’i Jean Andrianaivo Ravelona amin’ny mozika ba gasy voasoratra ary ny mozika klasika iraisam-pirenena nolalaovin’i Mahery Andrianaivoravelona.
Marihina fa nosantarina tao amin’ny Unesco, ny volana septambra teo, ny fankalazana ny faha-50 taona nanaovan’i Jean Andrianaivo Ravelona hosodoko. Raha ny vina nambarany hanohizana ny hetsika: “hitohy any amin’ny firenena samy hafa ny fankalazana. Anisan’izany ny any Alemaina, ny any Belzika, indrindra fa any Madagasikara. Mbola hofaritana ny daty”.